Samachar Batika || News from Nepal » के प्रियङ्का कार्की ग’र्भवती छिन् ? (१५ फोटोमा हेर्नुहोस)
के प्रियङ्का कार्की ग’र्भवती छिन् ? (१५ फोटोमा हेर्नुहोस)
काठमाडौँ । म्यूजिक भिडियो र चलचित्रमा एकछत्र राज गरिरहेकी सुन्दरी नाायिका प्रियंका कार्की पछिल्ला दिनमा काममा त्यति सक्रिय छैनन् । पल शाह, आकाश खड्का, स्वस्तिमा खड्का, लगायतका कलाकारहरुले म्यूजिक भिडियोबाट नै मनग्य आम्दानी गरिरहेका बेला प्रियंका भने कोरोना कालदृखि यताको समयमा पनि कुनै काम गरेकी छैनन् ।
निकै काम गर्ने खट्ने प्रियंकाको होलीको अवसरमा एकाएक एक तस्विर बाहिरियो जसमा उनी पती आयुष्मानसँग देखिएकी छिन् । सोही तस्बिरलाई आधार मानेर प्रियंकाका अधिकांश फ्यानले प्रियङ्का गर्भवती भएको अनुमान लगाएका छन् ।
तस्विरमा नै गएर फ्यानले प्रियंका ग’र्भवती भए नभएको कुराको जिज्ञासा राखिरहेका छन् । प्रियंका र पति आयुष्मानबिच के भइरहेको छ भनेर फ्यानहरूले आ–आफ्नो धारणा पोखिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:११